Wararka - Astaamaha daxalka ion chloride waa sida soo socota
Astaamaha daxalka ion chloride waa sida soo socota
1. Saamaynta ay Cl-ku leedahay daxalka biraha ayaa ka muuqda laba dhinac: mid waa in la yareeyo suurtagalnimada samaynta filim dheef-shiid kiimikaad dusha sare ee maaddada ama in la dardargeliyo burburinta filimka gudbinta, si kor loogu qaado daxalka deegaanka; dhanka kale, waxay yaraynaysaa milmidda CO2 ee xalka aqueous. , Si loo yareeyo daxalka maaddada.
Cl- wuxuu leeyahay astaamaha raadiye ion-ka yar, awoodda wax-galinta oo xoog leh, iyo soo-saarid xoog leh oo ka samaysan birta. Feejignaanta sare ee Cl-, waxay sii xoogeysanaysaa tabinta xalka aqueous-ka iyo iska-caabbinta elektrolytka. Way u sahlan tahay Cl- in uu gaaro dusha birta oo uu dardar geliyo geeddi-socodka daxalka deegaanka; Joogitaanka Cl- ee deegaanka aashitada waxay ka samaysan doontaa koloriin dusha birta lakabka milixda, waxayna ku beddeli doontaa filimka FeCO3 sifooyin ilaalin ah, taas oo keenta heerka daxalka oo aad u sarreeya. Inta lagu jiro habka daxalka, Clˉ kuma koobna oo kaliya godadka godadka, laakiin sidoo kale waxay ku urursataa meelaha aan laga soo saarin godadka godadka. Tani waxay noqon kartaa geedi socodkii hore ee daloolinta godadka. Waxay ka tarjumaysaa in qaab -dhismeedka lakabka labajibbaaran ee korantada ee is -dhexgalka u dhexeeya birta shaxanka iyo filimka wax -soo -saarka daxalka ay fududahay in la doorbido xayeysiinta Clˉ, taas oo ka dhigaysa isku -darka Clˉ ee is -dhexgalka. Meelaha qaarkood, Clˉ ayaa ururin doonta oo abuuri doonta nuklei, taasoo horseedaysa kala -daadinta anodic -ka ee aaggan. Sidan, matrixka biraha ayaa lagu qallajin doonaa qoto dheer oo la qodo, sameynta godad godad. Kala -dirista birta anode waxay dardar gelin doontaa fidinta Clˉ iyada oo loo marayo filimka wax -soo -saarka daxalka ee godadka godadka, waxayna sii kordhineysaa diiradda Clˉ ee godadka godadka. Nidaamkan waxaa iska leh Clˉ Farsamaynta kaneecada ayaa ah in marka uruurinta Clˉ ay ka badato qiime muhiim ah, birta anode waxay had iyo jeer ku jiri doontaa xaalad firfircoon oo aan la dhaafi doonin. Sidaa darteed, iyadoo la raacayo dabagalka Clˉ, godadka godadka ayaa sii wadi doona inay sii fidiyaan oo sii qoto dheeraadaan. In kasta oo nuxurka Na ee ku jira xalka uu aad u sarreeyo, haddana falanqaynta muuqaalka tamarta ee filimka wax soo saarka daxalka ma helin jiritaanka Na element, taas oo tilmaamaysa in filimka alaabada daxalka leh uu leeyahay door gaar ah oo ku fidinta cations jihada biraha; halka anion uu yahay mid sahlan in la dhex galo. Filimka badeecada oo aad u daxalka ah wuxuu gaaraa is-dhexgalka u dhexeeya substrate-ka iyo filimka. Tani waxay tilmaamaysaa in filimka waxsoosaarka daxalka uu leeyahay xulasho ion, taasoo horseedaysa kororka fiirsashada anion ee is -dhexgalka.
2. Nabaad -guurka birta austenitic -ka ah ee ions chloride waxay badanaa keentaa daxalka daloolka.
Farsamaynta: Aaladaha Chloride -ka ayaa si fudud loogu dhejiyaa filimka dheef -shiidka, iyagoo tuujinaya atamka oksijiinta, ka dibna isku dara cations -ka ku jira filimka dheef -shiidka si ay u sameeyaan koloriin milmi kara. Sidaas darteed, god yar ayaa ku daxalaysta birta jirka ee qaawan. Godadkan yaryar waxaa loogu yeeraa nuclei pitting. Chlorides -kaan si fudud ayaa loo biyo -shubay, si qiimaha pH ee xalka godka yar hoos ugu dhaco, oo xalku u noqdo acidic, kala diridda qayb ka mid ah filimka oksaydhka, taasoo keenta ions bir ah oo xad -dhaaf ah. Si loo burburiyo dhexdhexaadnimada korontada ee godka, QAADASHADA dibaddu waxay sii wadaan inay hawada galaan. Socdaalka gudaha, biraha ku jira faaruqa ayaa sii hydrolyzed. Wareeggan, birta aan saliidda lahayn ee austenitic -ku waxay sii wadaa inay si dhakhso leh oo dhaqso leh u xoqdo, waxayna u sii baxdaa xagga qoto dheer ee daloolka ilaa dalool laga sameeyo.
3. Cl- wuxuu saamayn ku yeelanayaa daxalka dillaaca. Marka daxalku bilaabmo, birtu waxay lumisaa elektaroonada meesha anode. Horumarka joogtada ah ee falcelinta, birtu waxay si joogto ah u lumisaa elektaroonada, qaddar badan oo Fe2 ayaa ku urura farqiga, iyo oksijiin ka baxsan farqiga ma fududa in la galo. Cl-ga aadka u guurguura wuxuu galayaa farqiga wuxuuna sameeyaa feejignaan aad u sarreeya, FeCl2 oo aad u heer saraysa oo leh Fe2, FeCl2na waa hydrolyzed Jiilka H wuxuu sababaa in qiimaha pH ee dillaaca uu hoos ugu dhaco 3 illaa 4, taas oo sii xoojinaysa daxalka.
Waqtiga dhejinta: Aug-12-2021